Nagu saabsan - NINGBO ACE MACHINERY Co., Ltd.
ACE Mashiinnada waxay si mug leh isugu daraysaa awoodda iyo ganaaxa si ay kuugu keento kan ugu fiican mashiinnada la taaban karo iyo isukeenista. Maaddaama aan nahay shirkad soo saare Shiine ah oo ka mid ah qalabka dhismaha culus, waxaan macaamiisha u soo bandhigi karnaa qalab ballaaran oo u heellan oo ay ka mid yihiin mashiinka biyaha, qalabka wax lagu gooyo, qalabka wax lagu shubo, miinshaar la taaban karo, iyo qasaaro la taaban karo Sidoo kale waa la heli karaa waa xulasho dhammaystiran oo ka kooban qalabka qalabka shubka ah. Aad ugu fiican dhismaha aasaasiga ah iyo dayactirka, alaabtayada waxaa badanaa looga faa'iideystaa goobaha shaqada sida waddooyinka, guryaha, fagaaraha, tareenada, iyo garoomada diyaaradaha.
Qalabka ACE waxaa lagu ansixiyay heerarka warshadaha sida CE iyo CCC. Laga bilaabo 2009, tas-hiilaadka wax soo saarkeena waxaa sanad walba hubiya xirfadlayaal ka socda TÜV SÜD Group. Tan iyo markii shabakaddeena qaybinta badmaaxiinta la aasaasay 2005, waxaan sugnay safarro dhoofineed oo gobollada ay ka mid yihiin Ameerika, Afrika, Bariga Yurub, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe, iwm.
Shirkadeena waxaa lagu soo daray 1995 sidii Warshad Mashiinka Dhismaha ee Zhenxing. Waxaan xarun ku leenahay gudaha degmada Yinzhou ee Magaalada Ningbo, sariirta Shiinaha ee cirbadaha gariirka-howlaheena ayaa ku bilaabnay takhasus gaar ah oo ka kooban qeybtaan. Ku dhowaad 2 sano oo khibrad ganacsi shisheeye ah ayaa noo oggolaatay inaan u soo baxno soo-saare caan ka ah warshadaha gudaha. Hantidayada shirkaddu waxay kordhisaa 8,000m2 halka aagga isku-darka sagxadda xarumahayaga ay gaarayaan 23,000m2. U dhawaanshaha dhow ee Dekedda Ningbo iyo Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Lishe waxay ina siisaa saad ku habboon.
Sababaha Loo Doorto Ningbo Ace Makiinado Co., Ltd.
Waxaan haynaa raasamaal diiwaangashan oo ah 1.3 milyan RMB iyo in ka badan 120 shaqaale oo ay ku jiraan 3 injineer wax soo saar, 3 kormeerayaal wax soo saar, 4 maareeyayaal bakhaar, 5 la taliyeyaal QA ah, 8 hawl wadeenno ah, iyo 95 shaqaale xirfad leh. Sannadkii 2012, waxaan diiwaangelinnay dakhliyada 38 milyan oo RMB ah. Kaabayaasheena shirkadeed waxay u kala qaybsan yihiin waaxyo iskood u gaar ah oo loogu talagalay takhasusyada sida horumarinta, wax soo saarka, isku imaatinka, sampling, fayadhowrka, hubinta tayada, iyo ilaha aadanaha. Maareynta shakhsi ahaaneed waxay noo ogolaaneysaa inaan sifeyno jawiga shaqada isla markaana aan hagaajino socodka socodka iyadoo si adag loo xakameynayo nidaamka xakamaynta tayada.
Iyada oo tayada wax soo saarka ay tahay mudnaanta koowaad, waxaan abuuri doonnaa summad dib u qeexaysa warshadaha.